CAABUDWAAQ İYO TAARİİKHDEEDA OO KOOBAN – Kismaayo24 News Agency
CAABUDWAAQ İYO TAARİİKHDEEDA OO KOOBAN
by admin 14th October 2016 14th October 2016 0123
Waa magaalo ku taal gobalad dhexe ee Dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka galgaduud. Waa magaalo ka mid ah magaalooyinka uguqadiimisan somaliya
Caabudwaaq waxay deegaan heer Ceel waxay yeelatay 1958 waxaana saldhiga magaalada lahaa allaha unaxariistee xaaji Sacdi Jaamac Doode iyo Cali Mire oo ahaa odayaashii magaalada asal ahaan kubilaabatay
Tuulo, magaalo iyo degmo inay noqoto waxay qaadata muddo 70 ilaa 90 sano hada laga joogo. Deegaankii uu casriyeeyay Dabcasar ayaa magaalada Caabudwaaq ka dhigay magaalo rasmi ah. Dowladihii wadanka mid walba qadarin iyo qiimeyn ayay siisay ilaa magaalada Caabudwaaq ay noqotay degmada ay haatan tahay.
Magaalada caabudwaaq waxaa ku yaal geed miri miri ah oo uu beeray alaha u naxariistee xaashi jaamac oo hada dadka magaaladu u yaqaan doqon ma waaye oo kuyaal dhexda bartamaha magaalada.
Magaalada Caabudwaaq waxay dhacdaa dhanka waqooyi ee gobolka Galgaduud, galbeed wadada dheer ee isku xirta gobolada koonfureed iyo waqooyi ee Soomaaliya. Dhanka koonfureed magaalada ugu wayn ee Caabduwaaq ugu dhow waa magaalada Baladwayne. Dhanka waqooyi magaalada Gaalkacyo ayaa ugu dhow. Magaalada Caabudwaaq koonfur, galbeed iyo waqooyi waxaa kaga teedsan magaalooyinka Balanbal, Dhuusamareeb iyo Ceelbuur. cadaado oo ah degmada ugu dhaw.
Intaas markaan uga soo gudbo taarikhda ayleedahay iyo juqraafi ahaan meeshay soomaaliya uga taalo waxaan rabaa in aan wax yar kataabto marxaladihii ay soo martay kadib burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya oo madaxwaynaha ka ahaa allaha unaxariiste maxamed siyaad barre
burburkii dhowladii dhexe kabacdi caabudwaaq waxay soomartay xalado adag sida magaaloyinka kale ee wadanka 1991 ilaayo dhamaadkii 2008 magaaladu ma aysan yeelan maamul rasmi ah oo kataliya magaalada hase ahaate waqtigaas wax rabashado ah oo waawayn kama aysan dhicin waxayna ahayd magaalo iska xasıloon oo xıtaa ay dad badan oo dagaaladii sokeeye ay saameeyen usoo barakaceen.
Dhamaadkii 2008-dii waxaa soo ifbaxay ururka diimeed lamagacbaxay Ahlusunna waljamaaca oo xaruntoodu ugu waynayd ay ahayd dhuusamareeb iyo Caabudwaaq sababta ugu wayn ee urur-kaan loosameeyayna waxay ahayd ladagaalanka Alshabaab waxa ugu wayn oo ay culumadu kakacdayna waxay ahayd markii ay Ururka Alshabab bilaabeen in ay qubuuraha faqaan oo ay kasoo saaran culumaa’u diin waawayn oo soomaaliyeed waxayna aamineen in ay Alshabaab ka taqalusikaraan ama ay joojinkaraan ugu yaraan dhulbalaarsiga ay waday alshabaab.
Alshabaab waxay bilowday weerer kadhan gobolada dhexe oo ay doonaysay in ay kuqabsadaan hase ahaate waxaa kahortagay A hlusunna waljamaaca waxayna lagaleen dagaal socday waqti dheer waxaana dhamaanba laga sifeeyay gobolada dhexe alshabaab ilaa ladhaafiyay baladwayne gurmadka ugu waynna waxa uu ugu ımaanayay Caabudwaaq maadama maagaloyinka kale ee gobolada dhexe uu dagaalka kasocday , Alshabaab majirto magaalo ay kaga dhicibyihiin Caabudwaaq oo maadama gurmadka ugu badan ee Ahlussuna waljamaaca uu halkaas ka imaanayay.
Waxaan xasuustaa 2012 mar aan usocday caabudwaaq oo aan kabaxay muqdisho marayayna dhulka waxaan marnay kudhawaad 17 kontrol oo ay ayagu lahaayen intaas aan marayayna waqtigaas qofna masheegankarin in uu uscodo caabudwaaq qofkii sheegtana gaariga waa kala harayeen gaari walba waxa uu dhahaa baladwayne ama galkacyo ayaan usocdaa.
Ahlussuna waljamaaca magaalada caabudwaaq waxay maamulayeen dhamaadkii 2008 ilaa 2013 intii ay maamulka magaalada gacanta kuhayeen magaalada caabudwaaq wax wayn ayaa iska badalay waxayna ku tilaabsatay horumar iyo nabad heer ay kagaadhay magaaloyinka ugu nabadda badan soomaaliya in ay kasoo dhexmuuqatay waxayna horumar kasamaysan meelo badan oo ay kamidtahay dhanka waxbarashada,arimaha bulshada iyo in ay siifiddo magaaladu.
Waxaana lawayneeyay wadooyinka magaalada dhexmmara oo burburkii dhowladdii dhexe kabacdi dadwaynhu kusoo durkay ayadoo waliba gurigii ama dukaankii wadada loo arko in uu udhowyahay ama soogalay asaga oo loo aabeyeelayn laduminayay dad waynaha degmaduna ay aad usoo djhaweeyen horumarkii ay wadeen.
fal danbiyeedka kadhacay lixdaa sano ee ay maamulka ahlussuna gacanta kuhayeen magaalada aad ayey uyartahay.
Waxaynamagaaladu kutaalbsatay waqtigaas horumar balaaran waxaana lixaad wayn kaqaatay ganacsata kasoo jeeda deegaanka
mudaddii ay ahlussuna gacanta kuhaysay magaalada waxaa laga hirgaliyay garoon duyuuradeed oo ay maalgaliyeen ganacsato kasoo jeeda caabudwaaq iyo waliba dadwaynaha caabudwaaq oo ay maalin walba ugu yaraan ay hal ama labo diyaaradood kasoo dagto (marka lagu daro diyaaradaha qaadka wada) .
dabayaaqadii 2013 waxii kadanbeeyay ahlussuna waxay lumisay awoodii ay kulahayd deg. Caabudwaaq ayadoo ay sabab u ahayd iska hor imaad dhexmaray ayağa iyo kooxa hubaysan oo kasoo jeeda beelkamid beelha dega deegaanka.
marar badan ayey isku dayday in ay ahlussuna soo ceshato awoodii ay kulahayd deg. Hase yeeshe uma suurtagalin in ay sidii hore magaalada u maamulaan. waxaana halkaas kabilowday dagaalo udhaxeeyo beelaha dega deg. Oo mararka qaar soo laba kaclaynayay inta badanse nabad ayey ahay.
2014-kii ayaa la aas aasay jaamacada galgaduud university oo ay xarunteedu tahay caabudwaaq waana jaamacada kali ee ku horaysay ee laga hirgaliyo gobolada dhexe, waajiraan jaamacado farac kuleh gobolada dhexe lkn waa jaamacado muqdisho laga leeyahay waxaa xusid mudan in ay arday waxkabarata caabudwaaq kagashay imtixaanaadka dowladda ee sanad dugsiyeedka 2016-2017 kaalmaha 2aad. 3aad iyo 4aad waxayna muujinaysaa heerka waxbarasho ee caabudwaaq haatan marayso.
Waxaa timid fikir ah in gobolada dhexe loodhiso maamulgoboleed hoos imaada dowlada waa laisku Fahmi waaya qaabka loodhisayo maamul goboleedkaas ayagoo ahlussuna rabay in ay maamulgoboleedkaas maamulaan ayagu oo madaxwayne dhexdooda laga soo doorta rabay madaxwayne in loogadhigo hase yeeshe way noqonwayda waxaana ladhisay maamulka galmudug oo oo loogu talagalay in uu karimiyo gobolada dhexe xibin iyo xeeb iyo gobolka mudug, waxaase tilaabadaas kaxumaaday ahlussuno oo inta badan gobolada dhexe gacanta kuhaya waxayna dhisteen maamul goboleed ay ula baxeen central state of somalia
Caabudwaaq oo labada maamulba kasoo horjeeday ayaa waxay dhisteen maamul loogu magacdaray galgaduud sare oo loogu talo galay in ay ka arimiyaan caabudwaaq iyo nawaaxigeeda hase ahaate awood uma aysan yeelan in ay maamulaan degaankaas loogu talagalay
Galmudug, central sate iyo galgaduud sare midna awood buuxda kumala caabudwaaq waxayna haatan kujirtaa xaalad adag oo colaad ah ayadoo bishii lasoo dhaafay lagu laayay odayaal iyo dhalinyaro kasoo jeeda deeganka ayna sabab uahayd aano qabiil oo dhextaal beelaha deg. Caabudwaaq dega.
Ugu danbayntii waxaan baaq nabadeed udiraya beelaha colaadu ay kadhaxayso ee degan caabudwaaq waxaana leeyahay dagaal wiilbaa kudhintee wiil kuma dhasho ee isdaaya oo illahay kabaqa
Dhalinyarada iyo waxgaratada kasoo jeeda deegaankaas waxaan kulatalinayaa in aysida iskudhaaman oo ay u istaagaan say u badbaadinlahaayeen iskagana qabanlahaayen dadka rabshada kuwada.
W/D Ahmed abdikarim mohamed
Xasaasi Dhageyso: Nabad-doon Xaad” Dowladu waa in ay Galakcyo geysaa Ciidamo Dheerad ah oo isugu jira Milatari Nabad Sugid iyo…….
TOP NEWS: Dhageyso Sargaalkii Horkacaayay Maleeshiyadii Galmudug kula Dagaalantay Godinlabe oo Isku soo dhiibay Galmudug+Magaciisa
Madaxweynaha: “Doorka ugu weyn ee dib u dhiska dalka waxaa iska leh Soomaalida’’ (Sawiro)
Dhageyso: Ku dhawaad 70 soomali ah oo mareykanka laga soo tarxiilay ayaa maanta laga soo dajiyay garoonka diyaaradaha muqdisho
IGAD oo Sheegtay in ay ka guuleysteen…
admin 17th August 2016 17th August 2016